Infuse 5 dia havaozina amin'ny vaovao manan-danja | Vaovao IPhone
Infuse 5 dia havaozina amin'ny vaovao manandanja
Ignacio Sala | | Fampiharana iPhone, Apple tv
Amin'izao fotoana izao no hany safidy azontsika jerena ao amin'ny App Store raha mila mpilalao video mamerina endrika misy, na inona na inona codecs ampiasaina, dia ny Infuse 5, fampiharana iray izay volana vitsivitsy lasa izay no navaozina tanteraka, ka nanery ireo mpampiasa ilay kinova taloha , Infuse 4, tsy maintsy miverina. Na dia marina aza fa tsy mora ity rindranasa ity dia mitentina 12,99 euro na 7,99 euro raha te hisafidy famandrihana isan-taona isika, mendrika ny euro rehetra izany, satria araka ny nolazaiko fa tsy misy safidy hafa ao amin'ny App Store tsy mifanaraka amin'ny endrika rehetra eny an-tsena fotsiny izany, fa satria manome antsika ny safidy afaka manao izany koa milalao ny horonan-tsary voatahiry ao amin'ny kapila mangirana amin'ny alàlan'ny Plex, Kodi, NAS….
Ny Infuse 5 dia ahafahantsika milalao atiny voatahiry mivantana ao amin'ny serivisy fitehirizana rahona ampiasainay, fampifanarahana trakt.tv, mifanaraka amin'ny AirPlay sy Google Cast izy io, ary koa mifanaraka amin'ny Apple TV an'ny taranaka faha-4. Ny Infuse 5 dia nahazo fanavaozana vaovao izay nanampiana asa vaovao, fiasa izay mety ho tsotra amin'ny tranga sasany, fa raha mampiasa azy io mafy isika, dia raisin'izy ireo tsara. Eo anelanelan'ny zava-baovao notoloran'ny kinova 5.2 an'ny Infuse 5 hitantsika:
Mikaroha tranomboky sy lahatahiry.
Tohano amin'ny horonan-tsary amin'ny endrika DVD, na ISO / IMG na VIDEO_TS na dvdmedia.
Azo atao izao ny mandefa streaming avy amin'ny NFS drive
Ny lohateny dia aseho miorina amin'ny daty famoahana.
Raha ny amin'ny fanombohana / famerenana / fitadiavana atiny dia nihatsara ny buffer, hany ka haingana kokoa ny entana ankehitriny.
Ny fahatokisana ny fifandraisana WebDAV dia nohatsaraina ihany koa
Fanatsarana ny filaminana sy ny fitoniana amin'ny fampiharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Infuse 5 dia havaozina amin'ny vaovao manandanja
RIP dia hoy izy:
Mampiseho izany fa tsy nitady be loatra tao amin'ny Appstore ianao, tsara raha misy ity app ity hijerena horonantsary amin'ny fitaovana iOS fotsiny nefa tsy mila manova azy ireo ... Manana iray izay ampiasaiko aho hatramin'ny nividianako ny iPad 2 a taona maro lasa izay, niasa tsara be izy io ary manome safidy maro hafa noho ny Infuse… ary ny tsara indrindra dia indray mandeha ihany no nandoa azy ary maimaim-poana ny fanavaozana rehetra. Tsy milaza ny anarana hisorohana ny dokam-barotra aho, azafady, alohan'ny hilazana fa ity no fampiharana tokana, ampahafantaro anao tsara.
Mamaly ny rip
Manome dokambarotra izy ireo, teneno ny anarana mba hahafantaranao tsara kokoa sy hitenenanao amin'ny fototra
Selui dia hoy izy:
Inona ny dokambarotra homenao? Ity dia bilaogy iray hampahafantarina ny tontolon'ny IOS ary hiaraka hanampy antsika hanana ny fampiharana tsara indrindra.
Valio i Selui
Alohan'ny hanoratako dia mampahafantatra ny tenako aho. Ny fampiasana lehibe ataoko amin'ny iPad dia ny mijery andian-tsarimihetsika sy sarimihetsika na aiza na aiza misy ahy. Nandritra ny taona maro dia nitady sy nitady rindranasa izay manolotra ahy izay rehetra atolotry Infuse ahy aho nefa tsy hitako. Tsy ny mpilalao rehetra no mifanentana, ohatra, amin'ny endrika audio AC3, na mamaky rakitra DVD, na manolotra antsika ny fiasa rehetra azontsika atao amin'ny Infuse. Angamba raha apetrakao ny rindranasa marobe dia hanao toa ny Infuse ihany izy ireo, fa misy iray ambonin'io dia misalasala aho.
Lalao sy fampiharana 16 maimaim-poana ho an'ny haingana indrindra (25 Janoary)
Podcast 8x19: iOS 10.3 News